Geeska Afrika: waxa uu yahay, sifooyinka, dhaqaalaha iyo colaadaha | Shabakadda Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 19/11/2021 10:00 | Kala bixid
El Geeska Afrika waa dhul baaxad weyn oo ka soo jeeda cirifka bari ee qaaradda Afrika. Waxay dhacdaa inta u dhaxaysa Badweynta Hindiya ee bari iyo Gacanka Cadmeed ee woqooyiga, dhererkeeduna boqollaal kiilo mitir ilaa badda Carabta. Guud ahaan Geeska Afrika waxa lagu qiyaasaa in uu ku fadhiyo dhul ka badan 772,200 oo mayl laba jibaaran, kuwaas oo badankoodu ay leeyihiin cimilo badheed-oomane iyo oomane ah. Inkastoo deegaano badan oo ka mid ah gobolka ay ka jiraan xaalado nololeed oo aad u adag, ayaa waxaa dhawaan la sheegay in dadka ku nool gobolka ay gaarayaan ku dhawaad ​​90,2 milyan oo qof.
Maqaalkan waxa aanu kuugu sheegi doonaa wax kasta oo aad uga baahan tahay Geeska Afrika, sifadiisa, dhaqaalihiisa iyo waxyaabaha uu xiiseeyo.
1 waa maxay geeska afrika halkee laga helaa
3 Dhaqaalaha iyo colaadaha Geeska Afrika
4 Macaluul iyo budhcad-badeed
waa maxay geeska afrika halkee laga helaa
Gobolkan waxa uu ku yaala Galbeedka Afrika waxaana lagu tiriyaa mid ka mid ah gobolada ugu saboolsan aduunka. Gaajada ayaa had iyo jeer khatar ku ah nolosha aadanaha. Halkaa waxa la rumaysan yahay in ay tahay meeshii uu bini'aadmigu ka soo jeedo.
Geeska Afrika waxa uu ku yaalaa dhinaca koonfureed ee qaarada Afrika, waana mid ka mid ah gobolada ugu xasiloonida xun caalamka. Waxay ka kooban tahay siddeed waddan oo kala duwan: Eritrea, Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudan, Uganda, South Sudan, iyo Djibouti. Waa aag dan u ah quwadaha Yurub iyo Ameerika sababtoo ah goobta ay ku taal ayaa ah mid muhiimad istiraatiiji ah u leh ganacsiga badda, haamaha shidaalka iyo xamuulka.
Geeska Afrika waxa loogu magac daray qaab saddex xagal ah. Taariikhdeedu waxa ay ka soo bilaabantay dalalka Afrika ee ku yaalla Itoobiya, Ereteriya iyo Yemen, waxaanay horumartay intii u dhaxaysay qarnigii XNUMXaad iyo XNUMXaad. Waqtiyadii hore, waxaa sidoo kale loo isticmaali jiray ilaha kheyraadka noolaha, iyada oo loo marayo safarro lagu sahaminayo malmalka, fooxa, iyo xawaashka. Gobolka ayaa hadda lagu tiriyaa inuu ku jiro xiisad daba-dheeraatay. In kasta oo ay dadku muhiimad gaar ah leeyihiin, haddana waxaa halkaas ka dhacay laba dagaal oo waaweyn, dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya, iyo dagaalkii Itoobiya iyo Ereteriya.
Deegaanka ayaa inta badan waxaa saameeya abaaro ama fatahaado iyadoo dhibaatada bini’aadantinimo ee ka jirta deegaankaasi ay tahay mid aad u daran. Intii u dhaxaysay 1982 iyo 1992, gaajo iyo dagaalka waxaa ku dhintay ku dhawaad ​​2 milyan oo qof.
Astaamaha Geeska Afrika ugu caansan waxaa ka mid ah:
Farqiga ugu weyni waa taas waxaa jira bannaano oomane ah iyo dhul hoose oo la yiraahdo buuraleyda Itoobiya, kuwaas oo loo kala qaybiyay laba qaybood oo dooxooyin ah.
Waqtigan xaadirka ah, geesku wuxuu leeyahay dhir badan, sida Heather, caws, iyo ubaxyo yar yar oo huruud ah oo caadi ahaan loo yaqaan St. John's wort.
In kasta oo gobolka intiisa badan uu yahay qalalan ama qalalan, dooxa jeexjeexa waxa ku suntan buuro iyo buuro xidhiidhsan.
Silsilada buuraleyda Simien waa mid ka mid ah safafka buuraha ugu weyn uguna muhiimsan ee aan heli karno.
In kasta oo xayawaanno badani ay u isticmaalaan aaggan sidii gurigooda, isku-darka muuqaalka qallafsan iyo cimiladu waxay abuurtaa jawi adag oo taranka xoolaha.
Geeska Afrika waxaa ku nool xamaaratada wadaniga ah oo ka badan kuwa kale oo ka mid ah qaarada Afrika.
Helitaanka biyaha ayaa dhiirigelin u ah duurjoogta dhulka bannaanka ah, sababtoo ah inta badan Geeska Afrika waxa ay helaan roobab aad u yar sanadkiiba.
Galbeedka iyo bartamaha dalka Itoobiya iyo deegaanada koonfureed ee dalka Ereteriya. roobabka mahiigaanka ah ee da'aya xilli-ciyaareedku waxay kordhiyaan roobabka sannadlaha ah.
Geeska Afrika waxa uu ka kooban yahay dalalka soo socda: Eritrea, Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudan, South Sudan, Uganda, iyo Djibouti.
Dhaqaalaha iyo colaadaha Geeska Afrika
Dhibaatada dhaqaale ee ka jirta Geeska Afrika ayaa waxaa u badan abaaro isdaba jooga oo saameeyay, taasoo sababtay cunto yari tii ugu darneyd abid. waddanku wuu noolaa oo sababay abaartii ugu horreysay qarnigii XNUMXaad. Cunto yaridu waxay keentaa jirro iyo jawaab celin hoose, iyo helitaanka waddooyinka iyo deriska oo isku dayaya inay cararaan waxay keentaa ciriiri iyo cawaaqib xumo.
Wadamada uu ka kooban yahay Geeska Afrika, Itoobiya waxa ay noqotay dalka ugu muhiimsan marka loo eego heerka ay marayso dadka, horumarka dhaqaale iyo doorka xasilinta ee gobolka. Waa dalka labaad ee ugu dadka badan Geeska Afrika waana horseedka ugu weyn ee xasiloonida Geeska Afrika. Waxaa xusid mudan in Itoobiya noqotay mid ka mid ah dalalka ugu kobaca dhaqaalaha badan Bariga Afrika.
Gobolka waxaa ka jiray dhibaato. Qowmiyado kala duwan ayaa ku tartamaya kheyraadka iyo booska. Dagaalka ka socda deegaanka ayaa sababay dhimashada kumannaan qof, taasoo ka dhigan in dalka uusan lahayn wax dowlad qaran ah oo hagta.
Colaadaha gumeysiga, waxaan ka xusi karnaa:
Dagaalkii ugu horeeyay ee Italo iyo Itoobiya
Darwiish iska caabin ah
Dagaalkii Labaad ee Talyaaniga iyo Itoobiya
Intii lagu jiray dagaalkii koowaad ee aduunka, Ololaha Bariga Afrika ayaa ka dhacay Geeska Afrika; intii lagu jiray dagaalkii labaad ee aduunka waxaa sidoo kale jiray ololihii Bariga Afrika. Isku dhacyo kala duwan ayaa sidoo kale ka dhacay meesha waqtiyada casriga ah, tusaale ahaan:
Dagaalkii Xornimada Ereteriya
Dagaalkii sokeeye ee Itoobiya
Dagaalkii sokeeye ee Jabuuti
Xabashida iyo Eritereeya
Dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya
Macaluul iyo budhcad-badeed
Dhibaatada cunnada ee Geeska Afrika waxaa lagu tiriyaa inay tahay macaluul waxaana lagu tiriyaa tii ugu darneyd tan iyo 1960-kii. Hay'adda Qaramada Midoobay ayaa ku dhawaaqday in aaggaas ay ku jiraan heegan cas, waxaana la fahamsan yahay in ilaa hal milyan oo qof ay gaajo u dhinteen. Caawinaad la'aanta caalamiga ah, dhibaatooyinka amniga qaranka iyo colaadaha ayaa ka dhigaya mid adag in wax ka qabashada iyo gargaarka bini'aadantinimo ay soo baxaan.
Abaaraha ayaa ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn, meelaha qaar ayaan roob ka di’in muddo ku dhow laba sano. Taas oo keeni karta in ay xoolo iyo dalaggii ka dhamaadaan, taas oo keeni karta macaluul iyo cudurro.
Xeeldheerayaasha ayaa rumeysan in haddii aan degdeg wax looga qaban inay Macluushu ku fidi doonto dalalka kale ee Geeska Afrika. Nafaqo-xumada, Qiimaha qaaliga ah ee badeecadaha qaar iyo faragelinta kooxaha fallaagada ah ayaa gobolka geliyey dhibaatooyin aad u badan maalin kasta.
Tani waa dhibaato iyo khatar joogta ah oo ku jirta maraakiibta caalamiga ah iyo hawlaha kalluumeysiga ee halkaas ka jira. Waxay u dirtay roondo militari si wadajir ah iyada oo ay weheliyaan Maraykanka oo wakiil ka ah Midowga Yurub. Laga soo bilaabo 2011, inkasta oo uu jiray hoos u dhac, dhibaatada si buuxda looma cirib tirin.
Waxaan rajaynayaa in xogtan aad wax badan ka baran karto Geeska Afrika iyo sifooyinkiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Geeska Afrika
Waa maxay cufisjiid